Indlela kuhlangana umntu - WND
Indlela kuhlangana umntu – WND
A kwiiveki ezimbalwa eyadlulayo, rediscovered McCall ke magazine inqaku dating emva amathandathu eminyaka – – wathabatha internet yi-isichotho. Ukhim Marx-Kuczynski ukusuka Madison, Wisconsin, kufunyenwe endala mba e a rummage ziyathengiswa kwaye ukuthengwa kuya kuba dollazi. Inqaku, unelungelo lokuba”Iindlela Ukufumana Umyeni,”wacebisa nasiphelo”cringe-abafanelekileyo”iindlela ukutsala i-ingqalelo babantu, ranging ukusuka sweet ukuba creepy ukuba silly ukuba stupid. Imizekelo iquka:”Ndicinga ukuba inqaku ngu reflective ye-loluntu mores ye-era, ndafumanisa i-uthelekiso phakathi oko kwaba owamkelekileyo ke yintoni owamkelekileyo ngoku fascinating,”Bw Marx-Kuczynski waxelela Okruqukileyo Panda.”Kanjalo wenza kum ngako oko ke kakhulu inkqubela wenziwe ukuba zenziwe. Ke madala kwaye absurd kwaye funny, kodwa waba ezinzima intentions. Society itshintshile okuninzi kwi-yokugqibela amathandathu eminyaka, kwaye eli nqaku exemplifies neeyantlukwano phakathi into yethu moms kwaye grandmas wakhulela kunye kuthelekiswa ngokwethu nokuza izizukulwana. Ke fascinating.”Consensus bethu banamhla era ka-feminism kwaye ukulingana phakathi sexes”Wena anayithathela kuza elide indlela, baby.”Abafazi ayisasebenzi kufuneka alile quietly kwi yembombo okanye sikhubeke e a strategic mzuzu ukuhlangabezana umntu. Ngoku makhe siqwalasele i-inqaku ukususela Huffington Ngeposi, xa omnye strongest media supporters ka-feminism kwaye ngokwesini. Igqityiwe kwi-Dis, inqaku linelungelo”Everyday Iindawo Kuhlangana Omnye Abantu.”Ke sikwi uthetha HuffPo, folks.
Uluhlu lwabo yindlela eerily efanayo ukuba McCall ke uluhlu kwaye recommends abafazi khangela ngaphandle golf izifundo, ubusuku esikolweni iintlobo, sporting iziganeko, iklasi reunions kwaye iqela vacations. Eneneni, inqaku unika ngoko ke, abaninzi similarities ukuba McCall ke uluhlu ukuba ndimangazekile ukuba kokuba kufunyenwe ngayo kwiminyaka emibini phambi Bw Marx-Kuczynski baye. Kodwa ekubeni kwenzeka kangangoko banako, abafazi abaninzi ingaba belatedly realizing kwenzekile ngomhla omkhulu personal iindleko ezinokufumaneka. Njengoko nkqu progressives e HuffPo bonisa, uninzi abafazi ekugqibeleni nje ufuna settle phantsi kunye mnandi umntu kwaye nyusa usapho. Kodwa baninzi abafazi ngokulula andazi njani – noba njani ukufumana umntu, okanye indlela gcina kuye kuba elide. Ukuba abafazi wachitha kangangoko ixesha kwaye amandla ilungiselela kuba umfazi njengoko baye umleqa zabo careers, babo personal ubomi abe-hluke kakhulu ngenene.”Ngokungafaniyo ne-wonke omnye kwisizukulwana kwimbali,”ubhala Suzanne Veneer yayo ezibalaseleyo incwadi”Indlela Khetha Umyeni,zezenu waye wafundisa ukuba postpone umtshato ngokungathanga ngqo okanye sukuyinaka ngokupheleleyo, ngokungathi umtshato kokuba akukho bephethe kwindlela yakho ulonwabo.
Kodwa abantu abaninzi musa ukhlala omnye
Amadoda nabafazi ingaba irrevocably ngokulinganayo! omnye komnye. Ukususela ekuqalekeni kwexesha, oku utsalekoname wenziwe lokuqhuba umkhosi wethu survival njengohlobo – kwaye kude kube nje decades sele phantse rhoqo ngenxa kwi-lasting umtshato. Kodwa kwenye indawo ukuya umgca, silahlekelwe zethu indlela.”Veneer mentions i-relentless-antayi-indoda pro-ibhinqa rhetoric apho ke abaninzi progressive abafazi ingaba eboniswe – kwaye kuyo lies i-dichotomy kunye HuffPo inqaku. Ukuba feminist bale HuffPo bayakhuthazwa ukuba khwela i-corporate ladder kwaye nindivavanye ukuba abantu njani yomelele kwaye linalo igunya ngabo, ndimangazekile njani HuffPo justifies ishicilela i-inqaku echoing iingcebiso ezivela.
Ngokucacileyo, hayi wonke umfazi ufuna ukufumana watshata
Kodwa ngaphaya koko, intsholongwane ukufundisa abafazi ukuba umtshato akufanele omnye wabo ubomi ke, iinjongo kuba uninzi abantu bamele sexist jerks asingomsebenzi ezingachanekanga, ke ububi.”Uninzi abantu bamele kakhulu nicer kunokuba ufuna anayithathela sele ekhokelwa ukukholelwa,”observes Veneer.”Kwaye uninzi aren khange threatened yi-umfazi ngamandla. Baya care kuphela xa kweli gunya efumana kusetyenziswa ngokuchasene nabo okanye umtshato budlelwane.”Ugxininiso koko yoqobo. Enzulu phantsi, mna suspect progressives yazini oku kakuhle kakhulu. Kutheni ongomnye ingaba HuffPo yenza kwakhona uluhlu njengoko baye.
Njengoko columnist Patty Ann Malley balibeke,”Umphinda-tshintsha
Abantu musa.”Enye into ke abaninzi bale mihla abafazi musa ufuna ukuva ingaba yimalini le-xanduva amandla kwaye umanyano a umtshato ziphantsi phezu kwabo.”Ngaphandle kokuba enye i-cad,”utshilo Veneer kwi-italicized script,”yintoni kufuneka azise ukuba umtshato ithebhule babe kakhulu kusenokwenzeka ukuba ufumanise elimfiliba yakho umtshato.”Ngamanye amazwi, kuba uhlobo umfazi kuwe, nento yokuba ngathi enye. Akukho sane umntu ufuna enye a shrieking harridan abantliziyo izimvo a fashion statement a pink pussy hat – hayi ngaphandle kokuba umntu ke emasculated ukuba yena ngqo thinks lo ngumzekelo nabafana umgangatho kwi-umfazi. Veneer ke ukhetha ingcebiso kuba abafazi wanting a ndonwabe emtshatweni kukuba faka i-ehleli nje uyehova, ukumelana nokhuphiswano, defensiveness, sheer meanness ngoko ke, baninzi abafazi ukuthatha ngenxa yokuba ucinga lenza kwabo”zinamandla.”Ayithethi ukuba ibenze anamandla ngayo yenza kubo bangonwabanga kwaye w itchy. W itchy abafazi aren ukuba ndonwabe, kwaye bengenako ingaba abayeni babo (okanye abantwana). Ndibe conclude yi-daring ukunikela oku icebiso young abafazi abo bafuna ukuya kuhlangana indoda: Umthetho na elonyuliweyo, hayi feminist. Weaponizing yakho womanly ngamandla ngokuchasene abantu ayikwazi kakuhle zithetha a lonely ubomi ozayo
← Njani yobudala engama-guys kuhlangana younger abafazi. Mexican-Intanethi Dating
Iincam ukuba Hook Phezulu ne-Girls Xa kufuneka Utyelele Mexico Ukuhamba Ehlabathini →